Mwari Anoona Sei Kubatana Kwezvitendero? Pane Chinonzi Chokwadi Here?
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mizo Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Chitendero chinoita kuti tibatane here kana kuti tisawirirana?” Mubvunzo uyu wakabvunzwa vaverengi vepepanhau rinonzi The Sydney Morning Herald. Pane vakapindura, vakawanda vacho vanenge 89 muzana (89%), vaiona sokuti chitendero chinoita kuti tisawirirana.
VANOTSIGIRA kuti zvitendero zvibatane vanoona nyaya yacho zvakatosiyana neizvi. Eboo Patel uyo akatanga sangano rokuita kuti zvitendero zvibatane rinonzi Interfaith Youth Core akati: “Hapana chitendero chisingakoshesi kuva netsitsi . . . , chisingakoshesi kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza . . . , chisingakoshesi kubata vamwe zvakanaka.”
Ichokwadi kuti vaBhudha, veChechi yeRoma, vemachechi akabuda muRoma, vaHindu, vaMuslim, nevamwewo vakawanda, vanomboshandira pamwe kuti vapedze urombo, varwire kodzero dzevanhu, vamise zvachose kushandiswa kwezvimbambaira, uye kuti vakurukure nyaya dzezvakatipoteredza. Zvitendero zvakasiyana-siyana zvinombosangana kuti zvikurukure kuti zvingaita sei kuti zvibatane uye kuti zvikurudzirane. Vanopemberera kusiyana kwavakaita vachishandisa makenduru anenge achibvira, mitambo inoitwa panguva dzakarongwa, mimhanzi, minyengetero, nezvimwewo.
Kuita kuti zvitendero zvibatane ndiko here kunoita kuti kusawirirana kwazvo kupere? Mwari ari kugadzirisa zvinhu panyika nokuita kuti zvitendero zvibatane here?
INONGOVA NYAYA YOKUTI CHERO ZVITENDERO ZVABATANA HERE?
Rimwe remasangano makuru anoita kuti zvitendero zvibatane rinotodada kuti sangano raro rine zvitendero zvinopfuura 200 uye rinowanika munyika 76. Rinoti chinangwa charo ndechokuita kuti “zvitendero zvirambe zvichidyidzana zuva nezuva.” Asi zviri kuitika zvinoratidza kuti kuzvitaura kuri nyore pane kuzviita. Somuenzaniso, vanoronga mafambiro ezvinhu musangano racho vakati bumbiro ravo raifanira kunyorwa nokungwarira kuti risagumbura zvitendero zvakawanda zvakasaina bumbiro racho. Nei? Chimwe chikonzero ndechokuti pakava nokusawirirana panyaya yokuti Mwari aifanira kunyorwawo here mubumbiro racho. Saka havana zvachose kuzonyora nezvaMwari kana kumbotaura nezvake.
Kutenda kunenge kuchine basa rei kana Mwari akasataurwa nezvake? Uyewo sangano iroro rokuita kuti zvitendero zvibatane rinenge rasiyana papi nemasangano anoyamura? Ndokusaka sangano rambotaurwa nezvaro richizviti “isangano rinokurudzira kubatana,” kwete sangano rezvitendero.
CHITENDERO CHINONGOFANIRA KUKURUDZIRA UNHU HWAKANAKA CHETE HERE?
Mumwe mutungamiriri wechiBhudha anodanwa kuti Dalai Lama uyo anozivikanwa nokutsigira kubatana kwezvitendero akati, “Dzidziso dzezvitendero zvose zvikuru dzinokurudzira zvinhu zvakafanana zvinoti: rudo, tsitsi, uye kukanganwira.” Akawedzera kuti: “Chinonyanya kukosha ndechokuti tinofanira kuratidza unhu uhwu zuva nezuva.”
Ichokwadi kuti unhu hwakadai serudo, tsitsi, uye kukanganwira hunokosha. Jesu akataura murayiro unokosha unoti: “Naizvozvo, zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.” (Mateu 7:12) Asi kutenda kwechokwadi kunongoreva kukurudzira kuita zvakanaka chete here?
Achitaura nezvevakawanda vaiti vanoshumira Mwari munguva yake, muapostora Pauro akati: “Ndinovapupurira kuti vanoshingairira kushumira Mwari; asi havazviiti maererano nezivo yakarurama.” Nemhaka yei? Pauro akati, ‘nokuti vakanga vasingazivi kururama kwaMwari,’ saka “vakatsvaka kumisa kururama kwavo pachavo.” (VaRoma 10:2, 3) Sezvo vakanga vasingazivi chaizvo zvaidiwa naMwari kuti vaite, kutenda kwavo uye kushingaira zvakanga zvisingabatsiri.—Mateu 7:21-23.
BHAIBHERI RINOTII NEZVEKUBATANA KWEZVITENDERO
Jesu akati, “Vanofara vanoita kuti pave norugare.” (Mateu 5:9) Jesu akararama maererano nezvaaiparidza kuburikidza nokusatsigira zvokurwisana, uye nokuudza vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana mashoko erugare. (Mateu 26:52) Vaya vakateerera vakabatanidzwa nerudo rukuru. (VaKorose 3:14) Asi Jesu aingoda kuti vanhu vaibva kwakasiyana-siyana vabatane uye vagarisane zvakanaka chete here? Akabatana navo pamanamatiro avo here?
Vatungamiriri vechitendero chevaFarisi nechevaSadhusi vaipikisa Jesu zvakasimba, vachitotsvaka kumuuraya. Jesu akaita sei? Akarayira vadzidzi vake kuti: “Varegei vakadaro. Ivo vatungamiriri mapofu.” (Mateu 15:14) Jesu haana kumboda kubatana nevanhu ivavo muzvitendero zvavo?
Nokufamba kwenguva, pakatangwa ungano yechiKristu muKorinde, kuGirisi, guta raizivikanwa nokuva nezvitendero zvakasiyana-siyana. VaKristu vemunzvimbo yacho vaifanira kuita sei? Muapostora Pauro akanyatsoratidza kuti vaisafanira kubatana nezvimwe zvitendero paakanyora kuti: “Kururama kune ushamwari hwei nokusateerera mutemo? Kana kuti chiedza chine mugove wei nerima? Uyezve, Kristu naBheriari [Satani] vanotsinhirana pachii?” Akazowedzera kuti: “Naizvozvo ibvai pakati pavo, muzviparadzanise.”—2 VaKorinde 6:14, 15, 17.
Zviri pachena kuti Bhaibheri haritsigiri kubatana kwezvitendero. Asi ungabvunza kuti, ‘Chii chingaitwa kuti vanhu vabatane zvechokwadi?’
KUITA KUTI VANHU VABATANE ZVECHOKWADI
Nyika dzinenge 15 dzakaisa misoro pamwe chete dzikaita kuti pave nemuchina uri mudenga wakagadzirwa zvinoshamisa, unotenderera nyika yose, unonzi International Space Station. Unofunga kuti vaizobudirira here kudai vasina kuwirirana kuti vaizoshandisa purani ipi?
Izvozvo ndizvo chaizvo zviri kuitika panyaya yokuedza kuti zvitendero zvibatane. Kunyange zvazvo vachiedza kukurudzira kubatana nokuremekedzana, havasi kuwirirana kuti votevedzera mitemo ipi kuti vave nokutenda. Saka vanoramba vasingawirirani panyaya yedzidziso neyetsika.
Bhaibheri rine mitemo yaMwari yakaita sepurani. Tinogona kuita kuti mararamiro edu ose aenderane nezvinotaurwa neBhaibheri. Vaya vakabvuma zvarinodzidzisa, vakarega rusaruraganda uye rusarura runowanika muzvitendero uye vakadzidza kushandira pamwe chete murunyararo uye vakabatana. Mwari akagara ataura izvi achiti: “Ndichaita kuti marudzi achinjire kumutauro wakachena, kuti ose zvawo adane zita raJehovha, kuti amushumire akabatana.” Kubatana kunobva pakuva ne“mutauro wakachena,” kureva chokwadi chaMwari chinoratidza manamatiro atinofanira kuita.—Zefaniya 3:9; Isaya 2:2-4.
Zvapupu zvaJehovha zvinokukoka kuti ushanyire Imba yoUmambo iri pedyo nekwaunogara kuti uzvionere wega runyararo nokubatana kwavakaita.—Pisarema 133:1.
Pane Chinonyatsonzi Chokwadi Here?
Vanotsigira kuti zvitendero zvibatane vanoti hapana chitendero chinogona kuti ndicho chine chokwadi. Vangatoti kusabatana kwezvitendero ndiko kuri kukonzera matambudziko akawanda aripo iye zvino.
Kusiyana nemafungiro akadaro, Jehovha anotsanangurwa sa“Mwari wechokwadi” uye iye anotaura kuti haachinji. (Pisarema 31:5; Maraki 3:6) Jesu akataura nezvaMwari achiti: “Shoko renyu ichokwadi.” (Johani 17:17) Chokwadi ichi chiri muMagwaro akafemerwa naMwari, muBhaibheri. Rinotirayiridza uye rinotishongedzera “kuita mabasa ose akanaka.”—2 Timoti 3:16, 17.